Fahrdienst बासेल लिमोसिन सेवा र हवाई अड्डा स्थानांतरण ☆ टैक्सी बासेल हवाई अड्डा
बेसेल हवाई अड्डा स्थानांतरण र टैक्सी बासेल हवाई अड्डा
अतिरिक्त कक्षा को ड्राइभिङ्ग सेवा, सजिलै र A देखि बी देखि आरामदायक। चाहे टैक्सी बासेल एयरपोर्ट वा बासेलमा लिमोसिन सेवा द्वारा हवाई अड्डा ट्राफिक हो, हामी हाम्रो काम सुसंगत र सस्तो रूपमा गर्छौं।
हाम्रो अनुरोध फारम मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई फोन गर्नुहोस् + 41 78 861 35 50।
der Fahrdienst Basel राम्रो तरिकाले लिमोसिन सेवा को लागि बेसल र ज्यूरिच, सस्ते टैक्सी बेसेल हवाई अड्डा संग हवाई अड्डा स्थानान्तरण। घटनाहरूको लागि, मेलहरू (कला बासेल, Baselworld), बैठकहरु (WEF डेविस,), विशेष अवसर, निजी वा व्यापार यात्रा। तपाई चाँडै छोड्नुहुन्छ? रातमा ढिलो आइपुग्छ वा धेरै सामान छ? त्यसपछि तपाईं हाम्रो साथ हुनुहुन्छ हवाई अड्डा ट्राफिक ज्यूरिख र Basel बस सही, हाम्रो टैक्सी बासेल हवाई अड्डा सधैँ जान्छ। हाम्रो बेसेल हवाई अड्डा स्थानांतरण वाहनले7व्यक्ति र तपाईंको सबै सामानहरू समायोजन गर्न सक्दछ। हाम्रो सस्तो र आरामदायक सेवाबाट लाभ उठाउनुहोस्।
केवल तपाइँको व्यक्तिगत भाडा गणना गर्नुहोस्
बहुलक सवारी मूल्य
हाम्रो सेवाहरु: हवाई अड्डा ट्रांसफर द्वारा टैक्सी बासेल हवाई अड्डा,कार सेवा
लिमोसिन सेवा र टैक्सी बासेल हवाई अड्डा - हाम्रो साथ तपाईं सबै भन्दा राम्रो ड्राइव!
बासेल मा हाम्रो स्थानान्तरण सेवामा स्वागत छ! के तपाईं सहरमा जानुहुन्छ वा नजिकैको लिमोसिन सेवा बासेलको स्थानान्तरण वा एक छिटो टैक्सी बासेल हवाई अड्डामा जाने हो? यो सबै र धेरैका लागि, हाम्रो मित्रवत, प्रशिक्षित चालकहरू र साथै एक विशेष बेडा उपलब्ध। हामी तपाईंलाई शहर भित्र छाउछौं, उदाहरणका लागि बासेलमा हवाई अड्डा ट्राफिक Baselworld आर्ट बासेल। हामी व्यवसायी ग्राहकहरू र व्यक्तिगत व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध छौं। यसबाहेक, तपाईं बासेल र आसपासको क्षेत्रमा हाम्रो लिमोसिन सेवा बुक गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो पनि अन्य शहरहरूमा यात्राको लागि डेविस विश्व आर्थिक फोरम हाम्रो साथ कार सेवा WEF डेविस, अब हाम्रो साथ सम्पर्क बनाउनुहोस् र आफैले सुरक्षित बासेल र ज्यूरिखमा विशेष लिमोसिन सुरक्षित गर्नुहोस्!
लिमोसिन सेवा बासेल - बासेल देखि ज्यूरिच हवाई अड्डा सम्म
बेसल हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकहरू स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी वा खाजा राज्यहरूबाट आउँछन्। तिनीहरूले केवल एक लाख मिलियन शहरमा रातो रातो पुस्तक लेखे, तिनीहरू पनि मोबाइल हुन चाहन्छन्। एक देखि बेसल देखि बेसल विमानस्थल ट्याक्सी गर्न सक्ने ज्यूरिख airport, उदाहरणका लागि, स्विट्जरल्याण्ड मा तेस्रो ठूलो शहर मा B गर्न। होटलबाट एक ड्राइभ शहरमा कुनै गन्तव्य वा अर्को शहरमा स्थानान्तरण गर्दछ। वा पनि एक फरक देश! वास्तवमा यी घटनाहरू पनि छन्, जसमा हाम्रो शहरका थुप्रै पर्यटकहरूले बासेलमा हाम्रो लिमोसिन सेवाको लागि। विशेष गरी पर्यटकहरु र व्यावसायिक यात्री बेसल हाम्रो विशेष विमानस्थल शटल प्रयोग वा बेसल आफ्नो रहन समयमा हाम्रो कार सेवा बुक। तथापि, बस एक पटक एक अविस्मरणीय सवारी एक जन्मदिन वा विवाह को भाग रूपमा उदाहरणका लागि, इच्छा जो कोहीले राम्रो बेसल हाम्रो कार सेवा संग जान्छ! र हामी transferservice-basel.ch मा लचीला छन् र सीमा बिना कुनै सेवा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं हामीलाई अन्य क्यान्टनहरू वा देशहरूमा ड्राइव गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो हाम्रो लागि कुनै समस्या छैन!
एक लिमोसिन सेवा / upscale टैक्सी बासेल हवाई अड्डा को लागि आदर्श अवसर
त्यहाँ बेसल हाम्रो कार सेवा संग एक बुकिंग लागि घटनाहरू विभिन्न छन् तपाईं बेसल बस्ने वा यहाँ केही समय खर्च Assuming: तथापि, हामी सुरुमा बेसल गरेको शहर सीमा मा, सबै पछि 23 वर्ग किलोमिटर साँच्चै एक क्षेत्र रहने। स्विट्जरल्याण्डमा बासेल तेस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर हो र यसैले धेरै मानिसहरूलाई धेरै प्रस्ताव प्रदान गरेको छ। यसले दुवै बासिन्दाहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ। यदि तपाईं शहर भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, यो व्यवसाय वा निजी कारणहरूको लागि हो, तपाईं हाम्रो सुन्दर शहरको यात्रामा अन्तिम चरणको रूपमा हाम्रो टैक्सी बासेल एयरपोर्ट सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी उच्च र्याङ्किङ्ग अन्य देशका राजनीतिज्ञ, सेलिब्रेटीहरू वा व्यवसाय मानिसहरू विवेकमा र विशेष सेवा मूल्यांकन किनभने हाम्रो साथ एक कार भाडामा चाहन्छु। त्यसैले उदाहरण, सेवक, बैंकरहरुलाई, वरिष्ठ प्रबन्धकलाई वा बेसल हामीलाई एक कार किराया र विशिष्ट हवाई अड्डा ट्याक्सी रूपमा प्रयोग गर्ने राजनयिकहरुलाई लागि, छन्। बेसल पनि यस्तो नोवार्टिस, धेरै अरूलाई बीच, नियमित बेसल उच्च स्तरको व्यापार यात्रा होस्ट जो Roche, र स्विस अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, रूपमा चिरपरिचित कम्पनीहरु, बस्नेछ। के तपाईं एक व्यापार घटनाका लागि वा बासेलमा भ्रमण गर्ने भ्रमणको लागि बासेलको एक लिमोसिन भाडामा लिनुहुन्छ? एक व्यापार यात्राको लागि तपाईंले सही बाटोमा सही समयमा हामीबाट सही गाडी भाडामा लिन सक्नुहुनेछ! यो पनि निजी यात्राको लागि साँचो, साथै निजी व्यक्तिहरूलाई लागि (तपाईं हाम्रो विमानस्थल स्थानान्तरण ज्यूरिख गर्न ज्यूरिख देखि आईपुग्नु बुक यदि र) विभिन्न कारण सधैं एक यात्रा लायक लागि बेसल छ। यहाँ यो छ सिम्फनीत्यो कला संग्रहालय बेसलत्यो मेस्से बासेल वा, वर्ग को वर्गबाट, Basler Fasnacht र धेरै बढी अनुभव गर्न। यी पर्यटक हाइलाइटहरू यसको अलावा, जीवनमा हाइलाइटहरू पनि छन् जसको लागि बासेलको माथिल्लो टेक्सी इष्टतम अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उदाहरणका लागि, हाम्रो लिमोसिन सेवा विवाह, जन्मदिन वा वर्षौंका लागि पनि उपलब्ध छ। हाम्रो लिमोसिन सेवा बास्केटलमा विजय गर्नुहोस्।
लिमोजिन्स सेवा बासेल - क्यान्सर राजधानीमा हाम्रा गाडीहरू
तपाईं किन एक महान टैक्सी बासेल को आदेश दिन चाहानुहुन्छ? किनकि तपाईं एक विशेष ट्रांजिट वा बेसिल ड्राइभको साथ, बेसिलको माध्यमबाट शहरी यात्राको उच्च-गुणस्तरका सवारी साधनमा हुनुहुन्छ? यो वास्तवमा हाम्रो वीआईपी शटल बासेल छ, जुन हामी हाम्रो लिमोसिन सेवामा सवारी साधनको ग्यारेन्टी गर्दछौं। हाम्रो अतिरिक्त-कक्षा सेवा ठूलो गाडी निर्माताहरूको अतिरिक्त वर्गमा ठूलो हदसम्म आधारित छ। सुरक्षित र सहज यात्रा सुनिश्चित गर्नको लागि, हामी जर्मनीमा बनेको वाहन गुणस्तरमा भरोसा राख्छौं: हाम्रो साथमा तपाईंको लिमोसिन सेवाको रूपमा, तपाईं केवल आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। हामी चाहन्छौं कि तपाईं हाम्रो शहरमा सहज महसूस गर्न चाहनुहुन्छ, जहाँ पनि यो जान सक्छ। यो टेक्सिसबाट अलग रहन एक राम्रो तरिका हो, किनभने हामी न केवल तपाईंलाई बढावा दिन्छौं, हामी एक लिमोसिन सेवा हो। तदनुसार, हामी शीर्ष-बनाए राखिएको, विश्वसनीय र उच्च गुणस्तरका कारहरूसँग काम गर्छौं:
मर्सिडीज ई वर्ग
मर्सिडीज ई क्लास स्टेशन वैगन
Mercedes Viano (8 सीटहरू)
हाम्रो लिमोसिन सेवामा सवारीहरू व्यक्तिहरूको स्थानान्तरणको लागि उपयुक्त छ, जस्तै अनन्य एयरपोर्ट शटल वा ठूला समूहका साथ यात्राहरूको लागि। हरेक आवश्यकताको लागि हामी "सुरुमा" राम्रो गाडी छ। हामी आफ्नो ग्राहकहरु लाई हरेक ठाँउ उठाओ र उनलाई हरेक ठाँउ ले, यो transferservice-basel.ch मा अधिकतम maxims मध्ये एक हो।
टैक्सी बासेल हवाई अड्डा स्थानान्तरण - बस बससेल देखि ज्यूरिच हवाई अड्डा सम्म छैन
यो सँधै "बस" हुनुको लागि टाईसी बासेल हवाईअड्डा हुनु हुँदैन - हाम्रो वीआईपी शटल ले तपाईंलाई जहाँ पनि चाहानुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि केवल बेसल, तर स्विट्जरल्याण्डको मात्र नभई मात्र। के तपाईं बासेल मा आफ्नो हवाईअड्डा स्थानान्तरण वा बर्नमा छाउन्जेल ज्यूरिख एयरपोर्टमा लाग्न चाहानुहुन्छ? निस्सन्देह, हामी यो विशेष सेवा हाम्रो विशेष वाहनोंमा प्रस्ताव गर्दछौं। तर न केवल यो, हाम्रो लिमोसिन सेवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संचालित छ, तपाईले केवल 70km सम्म फ्रिबर्गमा जर्मनीमा स्टटगार्ट वा म्यूनिच भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ। साथै लिचटेन्स्टीन, फ्रान्स, इटाली वा फ्रान्स सम्भावित गन्तव्यहरू छन् जुन तपाईले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लिमोसाइन सेवाको उद्देश्य लिन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो विशेष लिमोसिनहरूमा तपाइँ केहि पनि छुट्याउनु हुनेछैन, न सान्त्वना र न सुरक्षा। Apropos: हाम्रो सबै चालकहरूले मात्र तिनीहरूका विवेकद्वारा मात्र विशेषता छन्, तर तिनीहरूका विवेक ड्राइभिङ्ग शैलीद्वारा पनि। निस्सन्देह यो मतलब छैन कि तपाईं समय मा आफ्नो नियुक्ति बनाउन सक्दैन। हाम्रा चालकहरूले विभिन्न देशहरूमा शहरी र लामो-दूरी ट्राफिकमा ट्राफिक नियमहरूसँग परिचित छन् र तपाईंलाई पक्कै रूपमा तपाईंको इच्छित गन्तव्यको रूपमा पक्कै रूपमा लिन्छ।
तपाईंको टैक्सी बासेल हवाई अड्डा टीम